मिनोक्सिडिल साइड इफेक्टहरू र अन्तर्क्रियाहरू, र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट समाचार, कल्याण कल्याण औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट घरपालुवा जनावर खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल समुदाय, कम्पनी कम्पनी समाचार स्वास्थ्य कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> Minoxidil साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
Minoxidil साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
तपाईंले सम्भवतः सुन्नुभएको छminoxidil,सामान्यतया यसको ब्रान्ड नामबाट परिचित:रोजाइन (रोजा कुपन)। यो सामयिक उत्पादन पुरुष पैटर्न टक्कनको उपचार गर्नका लागि काउन्टर उपलब्ध छ। रोगाइनमा २% देखि%% मिनोक्सिडिल हुन्छ र यो अक्सर ट्यान्डनेस उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ वा कपाल झर्ने दुबै मानिस र मा महिला ।
के तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ कि मिनोक्सिडिलले पनि उपचार गर्न सक्छ उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) ट्याब्लेट फारममा, यो एक भासोडिलेटर औषधि हो जसले रगत नलीहरूलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ सम्पूर्ण शरीरमा रगत प्रवाह बढाउन। मौखिक minoxidil एक पर्चेको साथ मात्र उपलब्ध छ। Loniten, ब्रान्ड नाम minoxidil, अब बेचिएको छैन; केवल सामान्य minoxidil मात्र उच्च रक्तचाप को लागी उपलब्ध छ।
धेरै व्यक्तिहरूको लागि, मिनोक्सिडिलले कपालको पुनरागमन मार्फत विश्वास पुनर्स्थापित गर्दछ। वा, यो जिद्दी उच्च रक्तचाप स्तर सामान्य बनाउँछ, तर पुरस्कार सम्भावित जोखिमको साथ आउँछ।
Minoxidil का सामान्य साइड इफेक्टहरू
सामयिक मिनोक्सिडिल (मिनोक्सिडिल कूपन) को सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट भनेको एप्लिकेसन साइट दुखाइ हो, जस्तै सुख्खापन, खुजली, चुरोट, स्केलिंग, flaking, वा लालिमा। रोगाइन प्रयोग नगर्नुहोस् यदि तपाईको स्क्याल्प पहिले नै चिसो भैसकेको छ, वा तपाईको खोपडीमा दाग वा घाम लागेको छ भने। थप रूपमा, cबनावट वा शरीरको कपालको रंगमा ह्या ha्गहरू हुन सक्छ। केहि व्यक्तिहरूले सामयिक मिनोक्सिडिलमा एकदम थोरै वा कुनै प्रतिकूल प्रतिक्रियाको अनुभव गर्छन्, जबकि अन्यहरू बढी संवेदनशील हुन्छन्।
मौखिक minoxidil साइड इफेक्ट मा टाउको दुखाइ, मतली, वा बान्ता शामेल छ।
यी साइड इफेक्टहरू अस्थायी हुन सक्छन् र स्वाभाविक रूपमा एक पटक तपाईंको शरीरले औषधीको लागि समायोजन गर्दछ भने। Minoxidil का धेरैजसो साइड इफेक्टहरू टाढा जान्छ जब तपाईं उत्पादन प्रयोग गर्न रोक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित: Minoxidil के हो? | रोगाइन भनेको के हो?
Minoxidil का गम्भीर साइड इफेक्टहरू
Minoxidil गम्भीर वा दीर्घकालीन साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ। यो दुर्लभ हो, तर तपाईंको छालाले मिनोक्सिडिल ग्रहण गर्दछ। यदि तपाइँले निम्न कुनै पनि साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने मिनोक्सिडिल प्रयोग गर्न रोक्नुहोस्:
ढल्केर बस्दा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ
हात वा खुट्टा मा सूजन
असामान्य (द्रुत) तौल लाभ
अनावश्यक शरीर वा अनुहारको कपालको बृद्धि
एक भासोडिलेटरको रूपमा, मिनोक्सिडिलले रगत आपूर्तिमा वृद्धि गराउँछ, जसले तपाईंको मुटुको दर पनि बढाउन सक्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले मिनोक्सिडिल युक्त उत्पादनहरू प्रयोग गर्न पूर्व-अवस्थित हृदय अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई सल्लाह दिन सक्छन् किनभने यसले मुटुको दर बढाउँदछ र छाती दुखाइ निम्त्याउँदछ, हृदय विफलतालाई संकेत गर्दछ। यदि तपाइँलाई मुटुको समस्या छ भने, मिनोक्सिडिल प्रयोग गर्नु अघि आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
Minoxidil मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Minoxidil मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) लाई minoxidil प्रदान गरियोaकालो बक्स चेतावनी गम्भीर साइड इफेक्ट को लागी। यसले बिरामीहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यो औषधि प्रयोग गर्दा सम्भावित हानि बारे सचेत गराउँछ। नयाँ औषधिहरू लिनु अघि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् यदि तपाईलाई मिर्गौला रोग, मुटु रोग, वा पूर्व अवस्थित हृदय स्थिति छ भने। यी अवस्थाहरूमा, minoxidil प्रयोग तपाइँको लागि सही विकल्प नहुन सक्छ।
१ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूले रोजेनको रूपमा मिनोक्सिडिल उत्पादनहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। मिनोक्सिडिल प्रयोग गर्ने वयस्क व्यक्तिहरूले चिसो तापक्रममा बढि संवेदनशीलता अनुभव गर्न सक्दछन्।
Minoxidil सामयिक समाधान स्तनपान गराउने शिशुहरूलाई कम जोखिमको कारक प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यद्यपि, गर्भवती वा स्तनपान गराउने महिलाले रोजाइन जस्ता सामयिक मिनोक्सिडिल उत्पादनहरू प्रयोग गर्नु अघि पेशेवर चिकित्सा सल्लाह लिनु पर्छ। मिनोक्सिडिल समाधानको एक मिनेट रकम आमाको दुध दूधबाट शिशुलाई दिन सक्छ। उच्च रक्तचापको लागि लिइएको मौखिक minoxidil को रूप मा, यदि तपाईले अपेक्षा गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्, किनकि गर्भवती महिलाहरूमा यो परीक्षण गरिएको छैन। मौखिक minoxidil प्रयोग गरिनु हुँदैन यदि तपाईं स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ।
सामयिक मिनोक्सिडिल (जेनेरिक रोगाइन) का कुनै ज्ञात औषधि अन्तर्क्रिया छैन। जहाँसम्म, तपाईले अन्य स्किनकेयर उत्पादनहरू प्रयोग गर्नबाट अलग गर्नुपर्दछ - विशेष गरी रक्सी समावेश गर्नेहरू - त्यहि क्षेत्रमा तपाईले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट स्वीकृत नभएसम्म मिनोक्सिडिल लागू गर्नुहुन्छ। तपाईं कपालको र color्ग, रिलर, र परमम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर कपालको उपचार लागू गर्नु अघि स्क्याल्प खोल्नुहोस्। साथै, तपाइँले कपालको उपचारको २ before घण्टा अघि वा पछि मिनोक्सिडिल प्रयोग गर्नुहुन्न।
ओरल मिनोक्सिडिल (जेनेरिक लोनिटेन) ले रक्तचाप भनिने औषधिसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ guanethidine र ओर्थोस्टेटिक हाइपोटोनको कारण। यस प्रकारको कम रक्तचाप घट्ने बित्तिकै वा उठेको बेला उठेको हुन्छ। Minoxidil लिनु अघि guanethidine बन्द गर्नुहोस्। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईलाई सल्लाह दिनेछन् कि कहिले ग्वानिथिडिन रोक्न र कहिले मिनोक्सिडिल सुरु गर्ने।
के तपाईं minoxidil प्रयोग गर्दा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ?
मौखिक मिनोक्सिडिलको रक्सीको साथ प्रतिकूल औषधीको अन्तरक्रिया हुन सक्छ, रक्तचापमा कमी आएको छ। तर सामयिक मिनोक्सिडिलले रक्सीको प्रयोगको साथ महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिदैन। यद्यपि, रक्सीले छालालाई सुख्खा गर्न सक्दछ, जसले सामयिक मिनोक्सिडिल उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा तपाईंको छालामा जलन पैदा गर्दछ।
सिंगलकेयर छुट कार्ड पाउनुहोस्
Minoxidil प्रयोग गर्दा के म Finasteride लिनु पर्छ?
अध्ययनले संकेत गर्दछ कि Finasteride (Finasteride coupons) लिँदा पनि minoxidil प्रयोग सुरक्षित छ। मूल रूपमा विस्तारित प्रोस्टेट (सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, वा बीपीएच) को उपचारको लागि डिजाइन गरिएको हो,Finasteride (Finasteride को बारे मा अधिक)मौखिक पर्चा औषधि हो जसले कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ। Finasteride को ब्रान्ड नामहरुमा पर्सार (फिनडाइड5मिग्रि) र प्रोपेसिया (फिनमेराइड १ मिलीग्राम) सामेल छ। प्रोस्कर केवल पुरुष बीपीएच को लागी संकेत गरीन्छ तर कहिलेकाँही तोकिन्छ अफ-लेबल कपाल को विकास को लागी। प्रोपेसियाले पुरुष बान्की कपाल झर्ने उपचार गर्दछ।
न Proscar न Propecia न महिलाहरूमा प्रयोगका लागि संकेत गरिएको छ, यद्यपि कहिलेकाँही औषधीहरू बच्चा जन्माउने उमेर भएका महिलाहरूको लागि बन्द लेबलको रूपमा सिफारिस गर्न सकिन्छ। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि फिनस्टेराइडले एउटा भ्रुणमा भ्रुण की असामान्यताहरू निम्त्याउन सक्छ। गर्भवती वा बच्चा जन्माउने उमेरका महिलाहरूले प्रोस्कर वा प्रोपेसिया लिनुहुँदैन र कुचलिएको वा बिग्रिएको ट्याब्लेटहरू प्रयोग गर्नबाट जोगिनु पर्छ।
केहि फिनस्टेराइड उत्पादनहरूले शुक्राणु गणनालाई असर गर्न सक्दछ, जबकि मिनोक्सिडिलले गर्दैन।
सामयिक मिनोक्सिडिल साइड इफेक्टबाट कसरी बच्ने
रोगेन साइड इफेक्टबाट बच्न,निर्देशनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। कपालको वृद्धि प्राकृतिक ढिलो प्रक्रिया हुन सक्छ। दृश्य परिणामहरू आठ हप्तामा सजिलैसँग देखिन सक्छन् तर कपालको वृद्धिमा फरक देखिन चार महिनासम्म लिन सक्दछ। नयाँ कपालले पुरानो कपाललाई अगाडि बढाउँदा कपाल झर्ने (बहाउने) सुरुमा देखा पर्न सक्छ, तर यदि कपाल झर्ने समस्या कायम रह्यो भने उत्पादनको प्रयोग बन्द गर्नुहोस्।
प्रत्येक उत्पादनको त्यो सूत्रका लागि निर्देशनहरूको एक निश्चित सेट हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरू दिनमा दुई पटक औषधी प्रयोग गर्छन्; केहीलाई एक न्यूनतम एक घण्टाको अनुप्रयोगको आवश्यक पर्दछ, यद्यपि यो रातोरात पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं एक खुराक याद गर्नुभयो, छिटो भन्दा छिटो खुराक लागू गर्नुहोस्। यदि अर्को खुराकको लागि आवेदन समय नजिक छ भने, कुर्नुहोस्, र त्यसपछि औषधि लागू गर्नुहोस्। डबल डोज नगर्नुहोस्।
कसरी perioral dermatitis छिटो बाट छुटकारा पाउन
Rogine दुई वा तीन वर्षको शेल्फ जीवन छ, सूत्रमा निर्भर गर्दै। कोठाको तापमानमा to 68 देखि degrees 77 डिग्री फरेनहाइटमा उत्पादन राख्नुहोस्। उच्च तापक्रमले उत्पादलाई प्रभावकारिता गुमाउन सक्छ। साथै, उत्पादन ज्वलनशील हुन सक्छ र म्याद समाप्त हुने मिति ।
कसरी मौखिक minoxidil साइड इफेक्टबाट बच्ने
मौखिक minoxidilसामान्यतया दुबै एक मूत्रवर्धक र बीटा-ब्लकरको साथ तोकिन्छ। सूजन minoxidil को एक संभावित प्रतिकूल प्रभाव हो, तर एक नुस्खा मूत्रवर्धक गोली अनावश्यक तरल पदार्थ कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईका डाक्टरले सम्भवतः यी औषधीहरू एकसाथ लिनेछन्। तपाइँको हात, खुट्टा, एखाहरू, पेट, वा अनुहार फूलिएको हुन सक्छ नुन र पानी प्रतिधारण को परिणामस्वरूप मिनोक्सिडिल लिदा। पानी रिटेन्सनले अचानक weight पाउन्ड वा अधिकको वजन बढ्न सक्दछ। शरीरमा अधिक तरल पदार्थ हानिकारक हुन सक्छ र यदि कन्जेस्टीभ हृदय विफलता हुन सक्छ यदि गलत उपचार गरियो भने।
एक मूत्रवर्धक पिलिलको थपमा, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बीटा-एड्रेनर्जिक ब्लकिocking औषधि पनि लेख्दछ। किनभने minoxidil ले एकको मुटुको दर बढाउन सक्छ,aबीटा ब्लकर एपिनेफ्राइन (एड्रेनालाईन) रोक्दै रक्तचाप कम गर्न सक्छ। यदि तपाईंले मिनोक्सिडिल लिइरहनुभएको छ र छातीमा दुखाइ वा सास फेर्न कठिनाई भोगिरहनु भएको छ भने तुरुन्त चिकित्सकीय उपचार खोज्नुहोस्।
के minoxidil साँच्चै काम गर्दछ?
मौखिक minoxidilविशेष गरी उच्च रक्तचाप बिरामीहरूका लागि प्रभावकारी छ जसले अन्य औषधि औषधिहरूको प्रयोग गर्ने कोशिश गरेका छन् (अधिक मात्रामा एक डाइरेटिक प्लस दुई अन्य एन्टिहाइपरटेरिभ औषधीहरू) जुन असफल रहे। एक मूत्रवर्धक र बीटा अवरोधकको साथ minoxidil लिने minoxidil साइड प्रभाव सीमित गर्न सक्छन्। यसको फाइदाहरू प्रायः यसको जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्।
सामयिक minoxidilकपालको विकासको लागि प्रयोग गरिएको क्लिनिकली काम गर्नका लागि प्रमाणित छ। टाउकोको रक्त वाहिनीहरू खोलिन्छन्, पोषकहरूले कपालको फोलिकल्समा जान दिन्छन्। Minoxidil वंशानुगत कपाल झर्ने काम गर्दछ, जो वंशानुगतता, हर्मोनहरू, र उमेरका कारण कपाल झर्छ। Minoxidil केश हानि को केहि प्रकारहरु को लागी पर्याप्त नहुन सक्छ जस्तै lupus जस्तै एक ऑटोइम्यून डिसआर्डरबाट कपाल झर्ने वा केमोथेरापी, गर्भावस्था, वा रजोनिवृत्तिबाट कपाल झर्ने।
धेरै व्यक्ति सोध्छन् यदि Rogine एक dihydrotestosterone (DHT) ब्लकर हो। DHT एक हार्मोन हो पुरुष प्रकृति टक्कनको साथ सम्बन्धित छ, तर रोगेनले DHT लाई असर गर्दैन। रोगाइनले कपालको फोलिकल स्वास्थ्य कायाकल्प गर्दछ ताकि नयाँ कपालहरू बढ्न सक्दछन्।
रोगाइन दीर्घकालीन कपाल झर्ने र अचानक कपाल झर्ने बनाममा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। जबकि कपालको बृद्धि उत्पादन प्रयोग गरेको चार महिना भित्र सजिलै देखिन्छ, यस उत्पादनको फाइदा समाप्त हुनेछ जब तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न रोक्नुहुन्छ। तपाईले केश रेक्रोथ कायम राख्नका लागि लगातार उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
मिनोक्सिडिल शुरू हुँदा र रोक्दा र असंगत प्रयोगको साथ धेरै मानिसहरू कपाल बग्ने अनुभव गर्दछन्, बोर्डका प्रमाणित त्वचारोग विशेषज्ञ एमडी सुसन बार्ड भन्छन्। प्रत्यक्ष त्वचाविज्ञान ब्रूकलिन, न्यूयोर्कमा। यो सिफारिश गरिएको छ कि बिरामीहरूले अचानक माइनोक्सिडिल सुरू गर्न र पुन: सुरू नगर्न र बहाउन रोक्नको लागि यसलाई लगातार प्रयोग गर्न सिफारिश गर्दछ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोमका संकेतहरू पत्ता लगाउन सिक्नुहोस्
Things चीजहरू महिलाहरूलाई हृदय स्वास्थ्यको बारेमा जान्नुपर्दछ
zanaflex4मिलीग्राम को लागी प्रयोग गरीन्छ?
कब्जियत को लागी प्राकृतिक उपचार के हो
कसरी राम्रो को लागी खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन
कहाँ जाने जब तपाइँ स्वास्थ्य बीमा छैन
मेरो जन्म नियन्त्रण लागत कति हुनेछ?
percocet र norco मा के फरक छ?